नेपालको अर्थतन्त्र तथा पर्यटन उद्दयोगलाई नयाँ दृष्टिकोण दिनु पर्छः डा.प्रघानाङ्ग - Sunrise Nepal
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:१५ November 13, 2020
नेपालको अर्थ व्यवस्था एवं पर्यटन उद्योगलाई अब नयाँ दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनु पर्ने पर्यटन अर्थविज्ञ एवं गाँउ पर्यटन अवधारणाका जन्मदाता डा. सुरेन्द्भक्त प्रघानाङ्गले बताउनु भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र ‘लाहुरे अर्थतन्त्र’ मा अडिएको छ भने पर्यटन उद्योगको विकासले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको इज्जत राखेको छ । आफ्नो देशमा नेपाल सरकारले रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा कर्मबिर युवा शक्ति विदेशीनु पर्ने वाध्यता देशले बनाई दिएको छ । ६० लाख नेपाली जनता भारतमा काम र माम पाउन जाने आउने गरेको तथ्याड्क भारतीय टि.भी आजतकले बताएको छ । त्यसको तुलनामा भारतीय नागरिक नेपालमा काम र मामका लागि आउने गरेको संख्या ६ लाख रहेको छ । यस अर्थमा भारतीय तथा नेपाली कामदार रोजगारीको लागि आउने जाने १० /१० को अनुपातमा छ । यसै गरी समुन्द्रपार देश अमेरिका, क्यानाडा, मलेशिया, अस्ट्रेलिया आदि देशमा रहने नेपालीको छुट्टै तथ्यांक रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘नेपाली लाहुर’ लेखा व्यवस्थाले उचालेको छ । नेपालीहरु विदेशीएर अत्येन्त दुःख गरी कमाएको पैसा नेपालमा पठाउने गरेको छ । ८ खर्ब रुपिँया ‘रेमिटेन्स’ पठाउने गरेकाले देशको अर्थ व्यवस्थालाई वचाइरहेको छ । तर सरकार क्रियाशिल एवं उत्तरदायी छैन । नेपाली जनता–जवान लाई लाहुरे बनाउनमा सरकार मस्त छ ।
अब देशमा कोरोनाको महामारी भएको छ । यसलाई हटाउन र हराउन पनि सकेको छैन । ज्योतिषिशास्त्री एवं मानव कल्याण विज्ञहरुले अप्रिल २१, २०२१ पश्चात अर्थात ७÷८ महिना पछि मात्र कोरोना ‘भाईरस’ नियन्त्रणमा आउन सक्ने बताएका छन् ।
अब यस अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठीरहेको छ ?
नेपाल सरकार एवं पर्यटन व्यवसायीहरुले कोरोना मुक्त पर्यटकीय गाउँ (Corona Free Tourism Village) को व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यस्तैगरी शहरमा पनि कोरोना मुक्त पर्यटकीय शहर (Corona Free Tourism city) को अवधारणा ल्याउनु पर्दछ । कोरोना भाइरस परीक्षण गरि कोरोना भाईरस नेगेटिभ (Corona Virus Negative ) भएका व्यक्ति तथा पर्यटकलाई ‘Host and Guest relationship’ को दृष्टिकोणले हेर्नु र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस्तै गरी पर्यटन हस्पिटल (Tourism Hospital) को पनि शुभारम्भ गर्नु आवश्यक छ । ‘Host and Guest relationship’ गर्ने अवधारणाले देशको पर्यटन उद्योगले फड्को मार्ने छ । साथै कोरोनाबाट बच्न र बचाउन आवश्यक वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । Lockdown मात्रै समस्याको हल भएन । नेपाल सरकार तथा सचेत नागरिकले मुलुकको लागि विभिन्न राहत प्याकेज तथा पर्यटन व्यवस्थापन पद्दति अवलम्बन गर्नु आजको समयको माग हो ।